Vaovao - Fampirantiana fampiroboroboana ny sakafo iraisam-pirenena ho an'ny sakafo FIC China 2019
Tamin'ny 18-20 martsa 2019 FIC China International International Additives and Ingredients Exhibition dia natao tao Shanghai, Sina. Nanatrika ny fampirantiana ny Ocean Global.
Amin'ny maha-mpanamboatra hydrocolloid matihanina any Shina efa 20 taona mahery, ny Ranomasimbe Global dia miankina amin'ny haitao mandroso sy manatsara ny teknolojia fitrandrahana hamokarana vokatra rehetra misy kalitao avo lenta; ny vokatra lehibe eto aminay dia ny agaren-tsakafo, agar-bakteriolojika, agar tsy mety levona eo noho eo, carrageenan, agaro-oligosaccharide ary ireo vokatra mitambatra ao aminy, hatramin'ny 3000 taonina ny fahaizan'ny famokarana isan-taona. Ny vokatray dia nahazo alalana avy amin'ny ISO, HALAL ary KOSHER, koa afaka mahafeno ny fenitra nasionaly China sy ny fenitry ny EU, ary amidy tsara eran'i Chine ary aondrana any amin'ny faritra Azia atsimo atsinanana, eropeana ary amerikana sns.
Toerana: Shanghai, Sina
Fotoana: 18 - 20 martsa, 2019
Sakafo sakafo Sakafo i Shina dia hetsika misy fiatraikany sy firaisan-kina ho an'ny indostrian'ny sakafo additives sy ny akora ao Azia. 26 taona mahery izay no nikarakarana an'ity hetsika ity isan-taona any Shina. Orinasa mitarika amin'ny indostria mandray anjara amin'ity hetsika ity, manintona mpitsidika matihanina an'aliny. Isan-taona dia mihabe ny isan'ny mpandray anjara. FIC 2019 dia voalahatra manomboka amin'ny "18 martsa ka hatramin'ny 20 martsa 2019", ao amin'ny National Exhibition and Convention Center (Shanghai), Sina. Ankoatry ny fampirantiana ny vokatra sy serivisy farany, ny mpitsidika sy ny mpanentana dia afaka mandray anjara amin'ny andiany lahateny, seminera teknika, forum fihaonana an-tampony ary forum akademika. Amin'ireto hetsika manatsara ny fahalalana ireto, ny mpandray anjara dia afaka mahazo sary mazava momba ny firoboroboan'ny indostrian'ny sakafo, ny fandrosoana, ny zava-misy ankehitriny, ny fanavaozana, ny firoboroboan'ny fanjifana sakafo, ny fitsipika sy ny fenitra ary ny fampiroboroboana ireo sakafo manampy amin'ny sakafo.
Samy vonona ireo mpamatsy sy mpividy avy amin'ny tsena anatiny sy ampitan-dranomasina hiaina saga amin'ny hetsika famoahana vokatra sy haitao vaovao, ary seminera sy forum maro izay tsy mbola hitanao.